မီတာခမပိုအောင် မသုံးစွဲလျှင် ပလပ်ဖြုတ်ထားသင့်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > မီတာခမပိုအောင် မသုံးစွဲလျှင် ပလပ်ဖြုတ်ထားသင့်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
မီတာခမပိုအောင် မသုံးစွဲလျှင် ပလပ်ဖြုတ်ထားသင့်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 8:01 PM နည်းပညာဗဟုသုတ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် မသုံးစွဲပဲပိတ်ထားပေမယ့်လည်း လျှပ်စစ်အားသုံးကို စွဲယူသုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ပြောပြ ခြင်ပါတယ်။
တီဗီရဲ့ Channel လိုင်းလေးတွေကို ရှာပေးတဲ့ Digital TV Tuner လေးတွေကို တီဗီပဲ ပိတ်ပြီး Tunerကို မပိတ်ပဲ ထားမိရင် တစ်နေ့ကို 22W ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ တော်တော်များများက တီဗီပိတ်ရုံနဲ့ပဲ လုံလောက်ပြီလို့ ထင်နေကြတတ်ပါတယ်။
တီဗီကို ခလုတ်လုံးဝ ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲ Standby Modeပဲ ထားရင်လည်း တစ်နေ့ကို လျှပ်စစ်မီး 24 Wလောက် ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျုတာတို့ Laptop တို့ကို ပိတ်ရုံဘဲပိတ်ပြီး ပလပ်တွေ မဖြုတ်ထားပါက တစ်နေ့ကို 96 W လောက်ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ Standby Mode တို့ Sleep Mode တို့ထားပြီး ပလပ်ကိုမဖြုတ်ထားရင် ဒီထက် ၁ဆ ခွဲလောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။၅။ Timer ပါတဲ့ အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်း
Timerပါတဲ့ အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Oven တို့ကို ပလပ်ကြိုးမဖြုတ်ထားပါက တစ်နေ့ကို 108 W လောက်ကုန် နေပါလိမ့်မယ်။ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ်မသုံးသေးဘူးဆိုရင်
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ပလပ်ကြိုးတွေကိုဖြုတ်ထားပါ။ ခလုတ်ပိတ်ထားရင်တောင်မှ သူတို့က လျှပ်စစ်ပါဝါကို ဆွဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့အချိန် ဝါယာရှော့တွေ
သူ့အလိုလို အလဟဿသ ဖြစ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတွေက တစ်ခုချင်းစီဆိုရင် နည်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အများကြီးကို ရက်ပေါင်းများစွာ၊ လပေါင်းများစွာ စုလိုက်ရင် အနည်းဆုံး ကိုယ့်ပိုက်ဆံ သောင်းဂဏန်း သိန်းဂဏန်း လောက်က အလဟဿ. ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
#Nyein Zaw Aye
[Unicode]ဖတျရနျ မသုံးစှဲပဲပိတျထားပမေယျ့လညျး လြှပျစဈအားသုံးကို စှဲယူသုံးနတေဲ့ လြှပျစဈပစ်စညျးမြားအကွောငျးကို ပွောပွ ခွငျပါတယျ။
လူတှတေျေျာတျောမြားမြားက ဖုနျးအားသှငျးတဲ့ ခလုတျ (Charger) ကို ဖုနျးနဲ့ မသှငျးထားရငျတောငျ ပလပျပေါကျနဲ့ ဒီအတိုငျး တပျထားလရှေိ့ပါတယျ။ အဲ့လိုထားရငျ ဖုနျးအားမသှငျးပဲနဲ့တောငျ တဈနလေုံ့းကို 1.2 W လောကျ ကုနျနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖုနျးအားသှငျးပွီးရငျ charger ပါဖွုတျထားပါ။
တီဗီကို ခလုတျလုံးဝ ပိတျလိုကျတာမဟုတျပဲ Standby Modeပဲ ထားရငျလညျး တဈနကေို့ လြှပျစဈမီး 24 Wလောကျ ကုနျနပေါလိမျ့မယျ။
သူ့အလိုလို အလဟဿသ ဖွဈနတေဲ့ လြှပျစဈမီးတှကေ တဈခုခငျြးစီဆိုရငျ နညျးတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ လြှပျစဈပစ်စညျး အမြားကွီးကို ရကျပေါငျးမြားစှာ၊ လပေါငျးမြားစှာ စုလိုကျရငျ အနညျးဆုံး ကိုယျ့ပိုကျဆံ သောငျးဂဏနျး သိနျးဂဏနျး လောကျက အလဟဿ. ဖွဈနမှော ဖွဈပါတယျ။
မီတာခမပိုအောင် မသုံးစွဲလျှင် ပလပ်ဖြုတ်ထားသင့်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:01 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် မသုံးစွဲပဲပိတ်ထားပေမယ့်လည်း လျှပ်စစ်အားသုံးကို စွဲယူသုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ပြောပြ ခြင်ပါတယ်။ ၁။...